Blockchain News 30.07.2018 - Blockchain News
Chikunguru 30, 2018 arun
Greek dare kuti extradite Alexander Vinnik kuRussia kuti laundering $ 4 kuburikidza BTC-E
A dare nechiGiriki muguta Thessaloniki akapa chikumbiro chechipiri extradition wokuRussia mugari Alexander Vinnik, nyaya neDare Russian Muchuchisi General Hofisi. Gweta Dasha Musatov akati “Dare rwave kuti extradite Alexander Vinnik kuRussia.”
Vinnik akanga akasungwa muGreece musi July wa25, 2017, akumbirwa US zviremera, uchiraira naye vakawanda vatadze kusanganisira laundering $4 bhiriyoni emadhora kuburikidza zvino defunct BTC-E Exchange.
Australian bhengi anoti kubudirira pose zvokutengeserana blockchain kutongwa
The Commonwealth Bank of Australia (CBA) akapedza muchinjikwa-muganhu zvacho kuti kushandiswa blockchain kuti chamber nhumbi ari wedzerai cheni. The nemakambani, mumwe rokuAustralia “Big Four” mabhanga, akati kuti 37,000 LBS ose almonds Akatumirwa kubva Australia kuGermany, & vakanga yakawana Via munhu private blockchain pakakwirira yakatanga pamahombekombe. Kuita nodes of blockchain hurongwa aisanganisira mapato makuru romugove cheni, akadai zvokurima mugadziri Olam neminda uye logistic vatakuri, uyewo chengarava opareta Patrick zviteshi uye Port of Melbourne.
The CBA vati blockchain-based system rinochengeta humboo kubva mumidziyo, zvinyorwa uye kwema zvemari ari kuparadzirwa samambure. Zvazvakadaro, akasiyana vakaroorana vanogona panguva kuona uye chamber ruzivo pamusoro zvacho zvakasvika munyika-chaiyo nguva - Data kusanganisira mabhuku acho kwakaita chinzvimbo kana kuti tembiricha uye mwando of midziyo. Mubhengi akati izvozvo nokupa nguva vanopedzisira blockchain & zvino yakati “Izvi pamwero nemashoko vamwe vari wedzerai cheni mukuru pamwero pachena uye kunyatsoshanda pamusoro nzvimbo, mamiriro uye authentication vezvinhu vari kuendeswa.”
SEC Commissioner anoti Bitcoin inodzorwa & akura zvokukwanisa kuva ETF
Nguva pfupi pashure SEC vakaramba Bitcoin Exchange-mhindu Fund (ETF) Chikumbiro nyaya neDare Winklevoss mapatya musi July 26th, SEC Commissioner Hester Peirce akaratidza yake mwoyo pamwe Mutongo sangano kuramba Bitcoin ETF. Akataura kuti Bitcoin, sezvo chinokosha, inodzorwa uye yakura zvakakwana kuva akakodzera misika US. "Zviripachena, Bitcoin hakuna zvaibva zvakakwana, vanoremekedzwa zvakakwana, kana yaidzorwa zvakakwana kuva vakakodzera misika yedu,"Peirce akati maererano mukuru mukuru voruzhinji mashoko iye rakabudiswa kuramba asambofarirwa of Winklevoss Bitcoin ETF.
Peirce akawedzera kuti vakurumidze Mutongo SEC vasanyanya investor kudzivirira kupfurikidza aendesa vachembera of Bitcoin musika, iyo rakaona kuwedzera kugamuchirwa nokuda yaidzorwa masangano mari akadai Goldman Sachs, JPMorgan uye Morgan Stanley pamusoro inoverengeka apfuura. "Pamusoro pe, Ndiri kunetseka kuti nzira Komisheni kuti kurerutsa investor kudzivirira kupfurikidza precluding kukuru vachembera of Bitcoin musika. More zvechechi Kupinda kuti ameliorate vazhinji chokuita Commission pamwe chete Bitcoin pamusika kuti zvinokonzera ayo kusatendera hurongwa,"Peirce akati.
TransferGo anowedzera cryptocurrencies kuti mubhadharo Anwendung
TransferGo, mumwe London anotsanangura mubhadharo basa, rava kutanga mubhadharo Provider kupa cryptocurrency wokutengesera basa, uye ichapa Bitcoin, Litecoin nevamwe, pakupindura yakasimba kudiwa cryptocurrency. Daumantas Dvilinskas, muvambi uye CEO pamusoro TransferGo, akataura simba kudiwa cryptocurrencies "vatengi vedu aida izvozvo.” TransferGo ane zvinopfuura 65,000 vanozvishandisa uye achiwedzera 1,000 Vatengi itsva daily.
Kupfuurisa 4,000 vanozvishandisa chamakaisa zita renyu nokuda kwebasa idzva, iyo inopa rubatsiro mumitauro minomwe, ari mumaawa mashomanana okutanga. Dvilinskas akati makasitoma havazobvumirwi kutumira cryptocurrencies hama dzavo mune dzimwe nyika asi achange kutenga kwavo kushandisa. Dvilinskas akati “Sezvo chikuva, vari pano kugara, uye sezvo chikuva, tinoda kuva nyore chaizvo uye mushandisi-ushamwari nzira vatengi kuti kupinda izvi. "Akatiwo Blockchain Michina ichava itsva chishandiso mashoko mukutsinhana ari mari indasitiri.
Kraken Daily Market Mushumo 29.07.2018
KRAKEN Digital Chakanaka EXCHANGE
$42.5M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Correction Coming In This Brea...
LEDGER 30% OFF: https://www.le...
Too Late To Buy Tron? In A Lea...
Is it too late to buy Tron (TR...
WHY THE AUGUST CRYPTO BULL RUN...
Hey Altcoin Daily Team! Is Bi...
Bitmain Invests $110 miriyoni, ...
Bitmain Invests $110 Million i...
Previous Post:Blockchain News 27.07.2018
Next Post:Blockchain News 31.07.2018
Chikumi 17, 2019
Chikumi 16, 2019
altcoin AltCoin Buzz altcoin daily altcoins bitcoin bitcoin ongororo Bitcoin tsaona bitcoin tsaona pamusoro bitcoin nhau bitcoin nhau nhasi Bitcoin mutengo bitcoin mutengo kukura bitcoin mutengo nhau bitcoin hwokugadzira ongororo bitcoin nhasi misa cheni BTC btc nhau btc nhasi cardano crypto cryptocurrency cryptocurrency musika cryptocurrency nhau cryptocurrency wokutengesera crypto nhau decentralized kwavari ethereum ethereum ongororo ethereum nhau ethereum mutengo sei kuti mari bhizimisi bhizimisi bitcoin bhizimisi crypto ari bitcoin kuitwa kurovanya litecoin Neo nhau ripple pamusoro altcoins tron kana kutenga bitcoin xrp